Barnaamijka Caawinta Kireynta Canshuuraha
Ganacsigu si toos ah ugama caawiyo dadweynaha. Caawimaadda kirada waxaa lagu bixin doonaa iyada oo loo marayo bixiyeyaasha guryaha ee xaafaddaada ka jira.
Liiska Bixiyayaasha Barnaamijka Caawinta Kireynta Degmooyinka
Liistada Bixiyeyaasha Barnaamijka Caawinta Kireynta ee Dadka Waaweyn iyo Dhallinyarada
Barnaamijka Caawinta Kireynta Evidence (ERAP) wuxuu qeyb ka yahay jawaabta Gobolka Washington ee musiibada COVID-19. Barnaamijku wuxuu damacsan yahay inuu ka hortago raritaanka ka qayb qaadanaya faafida fayraska adoo bixinaya kiro hore, mid xaq ah iyo mid mustaqbalka ah. ERAP waxay bar-tilmaameedsaneysaa ilaha kooban ee kuwa leh baahiyaha ugu waaweyn iyadoo laga shaqeynayo in si siman loogu qeybiyo lacagaha. Taariikhda dhammaadkeedu waa Diseembar 31, 2020.
Bixiyeyaasha adeegga ee degmo kasta waxay ka shaqeynayaan inay dejiyaan barnaamijyada hadda. Caawinaad lama heli karo dhowr toddobaad. Boggan waa la cusbooneysiin doonaa markii macluumaad dheeraad ah la helo. Haddii aad u baahan tahay caawimaad kiro ah, fadlan dib u hubi cidda aad la xiriirayso toddobaadyada soo socda. Haddii aad la kulantid hoy la'aan, fadlan tag xiriiriyaha xagga sare ee boggan si aad u hesho macluumaad ku saabsan halka laga helo caawimaad.
Macluumaadka soo socda ayaa loogu talagalay bixiyeyaasha adeegga yaa maamuli doona barnaamijka:
Tilmaamaha Barnaamijka iyo Foomamka - Haddii aad raadineyso gargaar kiro, fadlan ha buuxin oo ha ku soo dirin foomamkan. Waxaad u baahan doontaa inaad ka hesho caawimaad adeeg-bixiyeyaasha markay barnaamijyadu soconayaan oo soconayaan.
Si toos ah ula xiriir maamulahaaga deeqda bixiya ee CHG ama OHY si aad uga hesho taageerada tilmaamaha iyo foomamka.
Duubista soo bandhigida "Wadayaasha Guri La'aanta ee gobolka Washington"
Tirinta Guri la'aanta: Xisaabinta kaladuwan iyo waxa ay ula jeedaan Waxaa jira dhowr siyaabood oo kala duwan oo gobolka Washington uu u tirinayo tirada dadka aan guryaha lahayn iyo qoysaska sanad kasta. Waxaad waxbadan ka baran kartaa warbixintan.
Guudmarka Nidaamka Guriyeynta Guri la'aanta iyo Maalgelinta Degmo kasta oo ku taal Washington, shabakad gobolka oo dhan ka kooban oo ururo aan faa'iido doon ahayn ah ayaa waxaa ku jira in ka badan 98,000 oo qof oo soo foodsaarta hoy la'aan sannad kasta. Warqadan ayaa ku siin doona macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan nidaamkayaga hoy la'aanta ah.
Qorshayaasha 5ta Sano ee Dawlada Hoose
Hoy la’aan (PDF)
The Sharciga Guri la'aanta iyo Gargaarka waxay u baahan tahay degmo kasta inay sameyso sahan hal maalin ah oo hal maalin ah oo ku saabsan dadka aan haysan guri joogto ah - labadaba kuwa la dajiyay iyo kuwa aan la degganeyn. Sanadka 2020 ee Waqtiga Tirakoobka (PIT) wuxuu dhacay Janaayo 23, 2020.
Hoy la'aanta Gobolka Washington waa mid wajiyo badan leh. In kasta oo awood u lahaanshaha guryaha iyo sinnaan la'aanta hantida ay yihiin sababaha ugu horreeya ee hoy la'aanta, haddana waxaan ognahay khibradaha qaarkood inay isku dari karaan khibradda shaqsiyeed ee hoy la'aanta, taasoo ku adkeyneysa iyaga inay helaan ama helaan ilaha jira. Waan ognahay in dhaawacyada iyo dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda ay ku badan yihiin dadka hoy la'aanta ah iyo in dadka midabka leh iyo bulshada LGBTQ ay si aan habooneyn u saameeyeen. Ujeedadaas, deeqo badan oo Ganacsi oo deeqo guri la'aan ah ayaa u baahan bixiyeyaasha adeegga si ay u muujiyaan karti ugu dhaqanka wanaagsan.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Tababbarka Deeqaha ee Adeegyada Guri La'aanta.